Industrial air inotonhorera vagadziri uye vatengesi - China indasitiri yemhepo inotonhorera fekitori
XK-18/23 / 25S musangano maindasitiri evaporative mhepo inotonhorera ndiyo inonyanya kufarirwa maindasitiri emhepo inotonhorera. Takazvigadzira nemasimba akasiyana 1.1kw, 1.3kw, 1.5kw kusangana zvakasiyana kudiwa. Uye kune kumusoro, pasi, padivi mhepo kubudiswa kuti zvive nyore kuiswa pamadziro, padenga uye dzimwe nzvimbo.
Nyowani 12cm ukobvu inotonhorera padiki maindasitiri emhepo inotonhorera XK-18/23 / ST
Maindasitiri emhepo inotonhorera ne12cm kutonhora mapedhi yakazvimirira yekutsvaga uye kusimudzira neXIKOO muna 2020.Yedu pachedu jekiseni kuumbwa uye neyedu yekushandisa modhi patent & chitarisiko patent. Inosanganisira kumusoro kuburitsa, pasi kuburitsa uye padivi kuburitsa, inogona kusangana zvakasiyana kudiwa kwekuisa nzvimbo. Iyo ...
hombe yemweya mafekitori emhepo inotonhorera kutonhora fan XK-30S
XK-30S hombe yemhepo maindasitiri emhepo inotonhorera kutonhora feni inozivikanwa maindasitiri emhepo inotonhorera. Iyo yakaderera 3kw simba rine hombe 30000m3 / h yemhepo, uye mweya kuendesa 40-50m mune pombi mutsara. Inoshanda kune inotonhorera 200-250m2 nzvimbo ine chidimbu chimwe. XK-30S guru wokufema maindasitiri mhepo inotonhorera feni vakagadzirira pamwe indust ...
nyowani yakakwidziridzwa duct kutonhora system maindasitiri emhepo inotonhorera XK-25H
XK-25H nyowani yakakwidziridzwa mutsipa inotonhodza sisitimu yemhepo inotonhorera ndiyo nyowani maindasitiri emhepo inotonhorera yakagadziriswa neXIKOO. kune kumusoro, pasi, padivi mhepo kubuditsa kuti zvive nyore kuiswa pamadziro, padenga uye nedzimwe nzvimbo.Iyi modhi nyowani ine yakanyanya kutonhora pad, iri nani evaporative uye kutonhora mhedzisiro. A ...
Stainless simbi hombe centrifugal maindasitiri emhepo inotonhorera XK-30/35/45 / 50S
XK-30/35/45 / simbi isina tsvina yakakura centrifugal maindasitiri emhepo anotonhorera akagadzirirwa musangano mukuru. Nemhepo huru yekufema uye nemhepo kumanikidza, iyo yekuendesa mhepo daro iri kure kuti ive 100-200meters. Iyo yakagadzirirwa kuve bhandi rinotarisa centrifugal fan ine isina simbi yakasimba uye yakasimba dura resimbi. Yakakwira inoshanda evap ...